traintraveltips မော်ကွန်းတိုက် | စာမျက်နှာ3၏3| တစ်ဦးကရထား Save
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ရထားအီတလီမှတဆင့်ခရီးသွားလာတစ်ခုမမေ့နိုင်သောအတွေ့အကြုံ. အီတလီနိုင်ငံရဲ့ရထားကွန်ရက်ကအီတလီမှာနီးပါးတိုင်းအဓိကမြို့ချိတ်ဆက်, အရပျသို့အရပျမှရရန်လွယ်ကူအောင်. မီးရထားဖွငျ့ဝိုငျးခရီးသွားလာမသာအီတလီနိုင်ငံကြည့်ဖို့တစ်မြန်ဆန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်…